iska Hor'imaad Khasaara Dhaliyay oo Ciidamo kawada tirsan Dowladda Federaalka ku dhaxmaray isgoyska Tarabuunka.
Ugu yaraan hal askari ayaa dhintay sedax qof oo shacab ahna dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib iska hor'imaad xooggan oo maanta ka dhacay degmada Hodon.
Maanta duhurkii ayay maleeshiyaad kawada tirsan dowladda Federaalka ku dagaallameen isgoyska Tarabuunka ee degmada Hodon bartamaha magaalada Muqdisho.
Goob joogayaal ayaa sheegay in Ciidamada dagaallamay ay isku qabteen maandooriyaha khaatka, hal askari ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhintay iska hor’imaadka halka sedax qof shacab ah ay dhaawacyo soo gaareen.
Dadka dhaawacmay waxaa kamid ah wariye u shaqeynayay Idaacadda Shabelle ee ka howlgasha magaalada Muqdisho, guddoomiyaha degmada Hodon ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamo katirsan melleteriga ay dhaxdooda dagaallameen.
Maleeshiyaadka DF-ka oo aan muddo 8 bilood ah wax mushaar ah qaadan ayaa ku dagaallama isgoysyada muhiimka ah, isbuucii lasoo dhaafay ayay aheyd markii ay ciidamo gadoodsan qabsadeen isgoysyada Zoobe iyo KM4 oo ah kuwa ugu mashquulka badan caasimadda.